Emirà Arabo Mitambatra: Fahafatesana sy faharavàna tamin’ny lozam-pifamoivoizana tamin’ny fiara miisa 200 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2018 5:18 GMT
Teo ambanin'ny fanadihadian'ny bilaogera ny fenitra fitondrana fiara any Afovoany-Atsinanana taorian'ny nahafatesana olona marobe sy naharatràna olona 350 tamin'ny fiara miisa 200 tao Abu Dhabi, Emirà Arabo Mitambatra. Raha nisy bilaogera iray nampitaha ny vono olona tamin'izay hitantsika tamin'ny vaovao momba an'i Iraka, nilaza ny hafa fa tsy azo nihodivirana izany.
Bilaogera Syriana Dubai Jazz, monina ao Emirà Arabo Mitambatra nanoratra hoe:
I've never seen such a horrible thing happenes in the UAE before, Baghdad sprang up to my mind (evoked by the burning mixture of steel and tires) when I saw these pictures.
Tsy mbola nahita zava-mahatsiravina toy izany mihitsy aho tany amin'ny Emirà Arabo Mitambatra, tonga tato an-tsaiko i Baghdad (mahita ny fifangaroan'ny vy sy kodiarana) raha nahita ireo sary ireo.
Blaogera Rosh manaiky fa tsy gaga tamin'ny loza amin'izany habeny izany izy. Manoratra izy hoe:
Bad weather/fog is to blame. Even though, (personally) I feel it's quite unbelievable, something of this magnitude could happen in the UAE – am not surprised.
Ny toetr'andro ratsy/zavona no omena tsiny. Na izany aza, (izaho manokana) mahatsapa fa tsy mampino izany, mety hitranga any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra ny zavatra amin'ity habe ity – tsy gaga aho.
Mahita fa maro ny olona mifindra ao amin'ny firenena, ary satria ny fitondrana fiara, angamba no hany safidy amin'ny fitaterana, misy fiara maro kokoa eny amin'ny làlamben'ny EAM. Na izany aza, ny tenako manokana, dia mahatsapa fa nisy fotoana tsara taiza sy fitsipi-pitondratena ny kolontsaina fitondrana fiara tao EAM. Nahita ireo fomba sasantsasany adala indrindra, tsy miraharaha indrindra sy tena mampitahotra indrindra amin'ny fitondrana fiara manerana an'i EAM aho.
Manipika ny maha zava-dehibe ny fitondrana fiara azo antoka i Rosh, hoy izy:
World class highways, flashy cars, traffic points or fines alone, shall not prevent accidents and save lives – sane & sensible driving culture is so important, can't stress that enough.
Tsy ampy hisorohana ny lozam-pifamozivoizana sy hiarovana aina ny làlambe kilasy manerantany, ny fiara mandeha haingana, ny toerana fiampitàna na ny lamandy irery- tena zava-dehibe ny kolontsaina fitondrana fiara am-pitoniana sy am-pahamendrehana.
Manoratra ao amin'ny UAE Community Blog, Rosh manontany hoe:
Izaho (sy Mars) ihany ve – sa misy olon-kafa mihevitra fa niteraka vono olona tamin'ny faha-11 ireo fiara may ny afo ireo (jereo ireo sary eo amin'ny lahatsoratra etsy ambany) tena mahavariana? Sahiran-tsaina aho mahita ireo fiara marobe main'ny afo? Toa hita fa may noho ny fiantraikany na zavatra hafa? Toa ao amin'ny fiara ny lelafo, ary tsy miparitaka manerana ny lalambe – izay mety hitranga raha sanatria nisy solika tafaporitsaka?
Misy zavatra tsy arako ve?
Tsy afaka nanafina ny fientanam-pony i Seabee avy any Dubai ary nampiseho izany rehefa avy nahita fitondrana fiara tsy amim-pitandremana – na dia teo aza ny loza niteraka onjam-pahatezerana tamin'ny alalan'ny fiarahamonin'ny mpitondra fiara. Hoy izy nanoratra:
Since Tuesday morning the media has been full of the carnage of the country's worst traffic accident, caused by brainless, moronic, criminally stupid people.
Hatramin'ny Talata maraina, feno momba ny fatiolona tamin'ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indrindra tao amin'ny firenena, ny fampahalalam-baovao, loza izay nateraky ny olona tsy misy saina, adala sy mpanao heloka bevava.
Tsy misy mpamily tsy mahalala izany any amin'ny firenena.
Saingy tonga tamin'ny fehin-kevitra aho fa tsy misy zavatra azontsika atao momba izany.
Ny zava-misy dia, izany ny olona. Mahatsiravina izy ireo. Tsy misy saina izy ireo. Adala amin-keloka izy ireo. Ary eny rehetra eny izy ireo.
Tezitra tamin'ny manampahefana ihany koa izy noho izy ireo tsy milaza ny tena anton'ny loza fa manome tsiny izany noho ny zavona. Hoy izy nanamarika:
Nitarika ny fiara tany amin'ny fiara hafa ny zavona. Tsy nitandrina ny zavona. Tao amin'ny finday ny zavona. Nandeha haingana ny zavona. Akaiky loatra ny fiara teo anoloana ny zavona. Nandroaka ireo fiaran'ny hamehana tamin'ny soroka matanjaka ny zavona mandatsa-drà.
Ny voalohany, miankina aman'aina, dingana amin'ny famahana ny olana ny mamantatra ny olana araka ny tokony ho izy tsy misy fitongilanana.
Raha tsy manao izany ianao dia tsy afaka mamaha ny olana. Tsy ho tontosa ny mamaha izany.
Ny antony nahatonga ny loza dia ny tsy fahaizan'ny mpamily. Tsy misy zavatra hafa.
Ratsy loatra ny fenitra fitondrana fiara, tsy misy fanambarana ofisialy fa tsy tokony homena tsiny noho ny loza ireo mpamily.
Teacherlady nanoratra momba ny zava-niainany manokana tamin'ny fitondrana fiara tany Afovoany Atsinanana. Hoy izy nanamarika:
In my own experience, it's rather like bumper cars or go-carts, only with more expensive and more destructive vehicles, usually driven by less than qualified drivers, minors, or rich kids who don't give a s*** who they hurt and will only ever slow down if they see a female walking alongside the road so he can desperately try to either get her number or haul her off to rape her in the desert. Okay, okay, not EVERY driver there does that, but I'm describing the worst ones.
Raha ny zava-niainako manokana, dia toy ny “autos tamponneuses” sy ny fiara “go-carts” [no entina], fa fiara lafo vidy kokoa sy mora manimba kokoa, izay matetika entin'ireo [mangalatra] mamily, zaza tsy ampy taona, na ankizy manankarena izay tsy miraharaha mihitsy izay dominy ary mandeha miadana rehefa mahita vehivavy eny an-dàlana mba hiezaka mafy hahazo ny laharana an-taribiny na mitondra azy mba hanolana azy any amin'ny tany efitra. Okay, okay, tsy ny mpamily rehetra no manao an'izany, fa mamaritra ny ratsy indrindra aho.
Manome antsika ny lisitry ny fanamarihana bebe kokoa ihany koa izy, izay ahitana ny:
4) Indicators? We don't need no stinkin’ indicators. You'll KNOW when I'm changing lanes when you see my license plate inches from your face.
7) Should you take a taxi alone and you're female, assume it as a given that 40% of your taxi drivers will try to molest you.
1) Tsy voatery ampiasaina ny jiro mena.
2) Tsy mihatra amin'ny mpanankarena ny fitsipika.
3) Tsia, tsy ny fiara no mandeha ho azy, fa ankizy 10 taona no mitondra azy.
4) Famantarana? Tsy mila famantarana masiso isika. Hahafantatra ianao rehefa miova zotra aho ary rehefa mahita ny takelaka laharan'ny fiarako eo amin'ny tarehinao aho.
5) Mety ho matroka ny fitaratry ny varavarankely ka mety manarona ny lohany amin'ny fanaronan-dite ny mpamily.
6)Tsara kokoa ny takelaka laharana mari-pamantarana tokana noho ny fianaran'ny zanakao eny amin'ny oniversite.
7) Haka taxi irery ve ianao ka vehivavy, hevero fa ny 40% amin'ny mpamily fiarakaretsaka dia hiezaka hibojaboja anao.
8) AZA mandeha miadana mihitsy, na inona na inona toe-javatra, rehefa manakaiky ny fiampitàn'ny mpandeha tongotra satria tsy misy olona mampatahotra.
Ny zavatra mahatsikaiky dia heveriko fa ratsy izany, saingy tsy nisy nanomana ahy ho an'i Kairo! Any Kairo, safidy ny ZOTRA, saingy tantara hafa tanteraka amin'ny andro iray hafa.